Wasiirka dastuurka oo kasoo horjeestay warqadii kasoo baxday xeer illaalinta guud ee qaranka – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka dastuurka oo kasoo horjeestay warqadii kasoo baxday xeer illaalinta guud ee qaranka
Wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa si kulul uga soo horjeestay warqad qoraal ahayd oo dhawaan kasoo baxday xafiiska xeer illaalinta guud ee Qaranka.
Warqadaasi ayaa ahayd qoraal uu xafiiska xeer illaalinta guud ee qaranka u diray Cumar Faaruuq Cismaan oo sheegta inuu madax u yahay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ.
Wasiirka oo bartiisa facebook-ga qoraal soo dhigay ayaa warqadaasi ku tilmaamay inay tahay mid fowdo ah, islamarkaana ka hor-imaanaysa sharciga u degsan dalka, isagoona sheegay in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu shir qabsan karo, iyagoo aanay u baahneen fasax dowladeed.
“Bal arrintaan iga eega, qof baa lagu eedeynayaa inuu shir qabtay amar la’aan iyadoo eey ku caddahay dastuurka dalka in muwaadiniiinta ay shir qabsan karaan, unana baahneen fasax dowladeed, bal arka dastuurka qodobadiisa 16aad, 20aad, 23aad, 24aad siiba farqadiisa 2baad oo kullii kasoo horjeedo waxa dacwaddaan ku Qoran. Ma dowlad wanaag baan rabnaa, mise fowda iyo musuq. Sharciga halloo hoggaansamo” Ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil!!!!!!!
Wasiir Xoosh ayaa lagu tilmaamaaa inuu ka mid yahay wasiirada aan inta badan la ganban mowqifyadiisa siyaasadeed, isagoona mararka qaar ku kaca falal ka baxsan nidaamka dowladeed oo kasoo horjeeda wada-shaqeynta hay’adaha dowladda ee dalka.